အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Pyae Phyo Thi Ha Oo - ဝီကီပီးဒီးယား
အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Pyae Phyo Thi Ha Oo
၃ အခြားဝီကီများထံသို့ ဘာသာစကားလင့်ခ် ချိတ်ဆက်ခြင်း
၄ Request for help
၅ Keyboard not comfrim
၆ Title suggestion
၇ File:ဟွတ်ခ် ရေးသားထားခဲ့သော စာအုပ်.jpeg ၏ ဖိုင်ရင်းမြစ်နှင့် မူပိုင်ခွင့် ပြဿနာ
မင်္ဂလာပါ Pyae Phyo Thi Ha Oo။ ဝီကီပီးဒီးယားမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဝီကီရဲ့ လမ်းစဉ်ငါးရပ်ကို ဖတ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
မြန်မာဝီကီမှာ ဆောင်းပါးသစ်တွေ ရေးသားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဆောင်းပါးနာမည်တွေကို မြန်မာလို ရေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ Ninja⛧Strikers «☎» ၁၇:၁၃၊ ၅ ဧ​ပြီ​ ၂၀၁၅ (UTC)
အခြားဝီကီများထံသို့ ဘာသာစကားလင့်ခ် ချိတ်ဆက်ခြင်းပြင်ဆင်
မြန်မာဝီကီဖက်က ဆောင်းပါးတွေကို အင်္ဂလိပ်ဝီကီပီးဒီးယားနဲ့ အခြားဝီကီတွေဆီကို လင့်ခ်ချိတ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ဖက်အောက်နားမှာ ရှိတဲ့ Languages အကွက်ထဲက Add Links ကို နှိပ် ⇒ တက်လာတဲ့အကွက်ထဲက Language: အကွက်မှာ English (enwiki) ⇒ Page: အကွက်မှာ အင်္ဂလိပ်ဝီကီက ဆောင်းပါးအမည် ⇒ link with page ကိုနှိပ် ⇒ Comfirm လုပ်လိုက်ရင် မြန်မာဝီကီဖက်က ဆောင်းပါးကို ကျန်တဲ့ အခြားဝီကီက ဆောင်းပါးတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
Ninja✮Strikers «☎» ၁၁:၀၉၊ ၁၈ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၁၅ (UTC)
Request for helpပြင်ဆင်
Good morning Pyae Phyo Thi Ha Oo! I amawikipedian from Vietnam. Could you please help createashort article in Thai wikipedia en:Hoằng Phúc Pagoda? Thank you very much for your help.113.161.220.14 ၀၄:၀၀၊ ၂၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၆ (UTC)
Keyboard not comfrimပြင်ဆင်
Can you help me?I am htet oo maung.I live in kyaukse,in mandalay division.I can not use my samsung keyboard.So, I hope you to help me. Htetoosteven ၁၁:၃၄၊ ၂၈ ဧပြီ ၂၀၁၆ (UTC)
ကြိုဆိုပါသည်။ Mayor mt (ဆွေးနွေး) ၁၁:၄၈၊ ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆ (UTC)
ဟွတ်ခ်၊ ရောဘတ် ဆိုတာထက် ရောဘတ် ဟွတ်ခ် ဆိုတာက ပိုပြီး လွယ်ကူပါတယ်။ ဥပမာ စတီဖင် ဟောကင်း လိုပေါ့။ ဟောကင်း၊ စတီဖင် ဆိုရင် ရှုပ်နေသလိုပဲ။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၆:၂၁၊ ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆ (UTC)
File:ဟွတ်ခ် ရေးသားထားခဲ့သော စာအုပ်.jpeg ၏ ဖိုင်ရင်းမြစ်နှင့် မူပိုင်ခွင့် ပြဿနာပြင်ဆင်
File:ဟွတ်ခ် ရေးသားထားခဲ့သော စာအုပ်.jpeg ဖိုင်ကို upload တင်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုဖိုင်တွင် မူပိုင်ခွင့် အခြေအနေနှင့် ရင်းမြစ်များ လိုအပ်နေပါသည်။ ဝီကီပီးဒီးယားသည် မူပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အထူးဂရုပြု ဆောင်ရွက်ပါသည်။
သင် upload တင်ခဲ့သည့် အခြားဖိုင်များကိုလည်း မှန်ကန်စွာ tag လုပ်ထားခြင်း ရှိမရှိကိုလည်း ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။ သင်၏ ဖိုင်တင်ထားခဲ့သည့် မှတ်တမ်းများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၇:၄၈၊ ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Pyae_Phyo_Thi_Ha_Oo&oldid=429960" မှ ရယူရန်
၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၆:၅၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၆:၅၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။